Alpine Fauna: Biby any Soisa, inona no hitanao? | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | Toerana fitsangatsanganana, Fialantsasatra any Eropa, mpitarika
Ny Alpes no habaka voajanahary lehibe indrindra any Eropa, saingy sehatra ara-kolontsaina iray ihany koa izy io izay nonina hatramin'ny andro talohan'ny vanim-potoana (ankehitriny dia manodidina ny 14 tapitrisa ny olona any an-tanàna ary mpitsidika manodidina ny 60 tapitrisa isan-taona). SAINGY ilaina ny manamarika fa marefo ny fandanjana sy ny kolontsaina ny tontolo iainana Ka raha te-hitsidika an'i Suisse hahafantatra azy ianao na hankafy ny fiompiana alika ao aminy dia tsy tokony hanelingelina ny bibidia ianao, indrindra amin'ny takariva sy mangiran-dratsy satria eo ny sakafom-biby.
ihany koa mila mitandrina tsara ny tontolo iainana ianao ka samy voaaro tsara ny biby sy ny natiora. Tsy maintsy mampiasa saina mahazatra ianao, fa raha ilaina dia azonao atao ny mamantatra ny momba ny lalàna manokana momba ny valan-javaboary, ny tahiry voajanahary ary ireo faritra arovana hafa mba hananana fihetsika sivika sy fanajana. Saingy aorian'ny nilazako izany rehetra izany aminao, te hiresaka aminao momba ny lafiny iray tiako aho: momba ny biby alpine sy ireo biby monina any Suisse.
1 Bibikely sy zavamaniry Alpine
2 Biby biby mampinono Alpine
2.1 Roe serfa
2.3 Osy an-tendrombohitra
2.5 biby mpikiky
2.7 Orsa mena
3 Biby Oviparous an'ny biby alpine
4 Misy biby mampidi-doza ve any Alpes?
4.1 Vitsy ny biby
4.2 Aza manakaiky azy ireo
4.3 Alika fotsy
4.4 Misy ny haromotana amin'ny alika, amboahaolo ary ramanavy
4.5 Bibilava misy poizina
4.6 Biby kely kokoa: kongona
Bibikely sy zavamaniry Alpine
Fantatrao ve fa ny iray amin'ireo zavatra mahavariana indrindra any Suisse dia ny natiora voaforona karazam-biby sy biby lehibe? Izany no izy, Suisse izao dia manana tanjon'ny fizahan-tany sy tontolo iainana hitahiry ireo zavamaniry sy biby hafakely, satria tandindomin-doza ny ankamaroan'ireo karazana vazimba teratany ireo noho ny fiovan'ny toetrandro.
Raha tia biby ianao, dia ho faly amin'ny fahafantarana fa raha sahy mandeha mitsangatsangana any amin'ny faritra ambanivohitr'i Suisse ianao dia hahita biby dia raha tsara vintana. Ireto misy ohatra azonao raisina: raha ny biby mampinono.
Biby biby mampinono Alpine
Ny diera roe, karazana iray toy ny serfa kely Mandeha an-kalalahana amin'ny lalana Soisa izy, noho izany mora ny mahita raha mitondra fiara isika.
Hanana fotoana hijerena chamois ihany koa isika, ny sasany biby be fiarahamonina, mitovy amin'ny gazela sy mahazatra an'ny Alpes.
Efa nahita osy an-tendrombohitra velona sy mivantana ve ianao? Any Soisa dia azo atao ny mahita azy ireo mandalo indrindra any amin'ny faritra feno lanezy sy tendrombohitra.
Ny fandehanana mamaky ireo faritra ambanivohitra Suisse dia midika fihaonana amin'ny amboahaolo saro-pantarina. Mahatalanjona ny hatsarany ary tsy handao anao izy
Ny biby mpikiky Alpine toy ny marmot, dia heverina ho lehibe indrindra any Eropa, ary azo jerena indrindra mandritra izany ny vanin-taona mafana.
Ao anatin'ireo biby soisa no ahitantsika ireo hares mailaka sy marefo. Na dia ny afaka aza ho sarotra ny mahita azy ireo satria haingana izy ireo ary matahotra olona be.
Azonao atao koa ny mihaona orsa volontsôkôlôzy manintona sy mihinana hena, izay nino fa lany tamingana nanomboka tamin'ny 1904, na dia kely aza ny 5 taona lasa, toa niteraka indray izy ireo.
Biby Oviparous an'ny biby alpine
Azonao atao ihany koa ny mahita vorona, vorona mahatalanjona izay tsy ho hadinonao ao an-tsainao. Ny sasany amin'ireo mety ho hitanao dia:
Anisan'izy ireo no ahitantsika ireo vorona mpihaza mpihaza fantatra amin'ny hoe voromahery, izay miorina eo an-tampon'ny tendrombohitra avo indrindra ao amin'ny firenena. Tsy isalasalana fa ny fahitana azy ireo manidina dia hetsika satria ny elany refesiny tsy latsaky ny 2 metatra farafahakeliny.
Anisan'ireo karazam-biby hafa azo jerena amin'ny alàlan'ny fizahan-tany ornitholojika isika dia mahita voromahery, goaika sy goaika. Farany dia lazainay aminao fa ny renirano Soisa dia tranon'ny trondro toy ny trout ary koa biby mandady no hita.
Misy biby mampidi-doza ve any Alpes?
Fa raha iray amin'ireo olona tianao mivoaka amin'ny làlana ianao handeha na hitsangatsangana amin'ireo faritra tsy misy miambina dia tokony ho fantatrao fa misy mpiremby be any Alpes. Ireo lehibe ny mpiremby dia toa miverina any Alpes Eoropeana taorian'ny namongorana azy tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Vitsy ny biby
Ohatra, ny bera any atsinanan'i Alpes, ny amboadia amin'ny Alpes andrefana, ny lynxes ... fa na dia misy aza izy ireo tsy maro an'isa izy ireo satria ohatra dia misy amboadia sy bera latsaky ny 50. Misy lynxes miisa 100 mahery monja ary miafina amin'ny olon-kafa izy ireo.
Aza manakaiky azy ireo
Na dia te hiala aminao aza ny biby na tsy hitanao satria miafina izy ireo dia ilaina ny tsy manandrana manakaiky biby dia (tsy amin'ny osy an-tendrombohitra, chamois, marmot, sns.) satria tsy mahazo aina ho azy ireo ary tsy maintsy hajainao fa eo amin'ny fonenany voajanahary izy ireo ary ny vahiny dia ianao, fa tsy izy ireo. Mety mahita omby masiaka ianao ary mety hahagaga anao izany, fa tokony hotazominao koa ny halaviranao.
Misy alika fotsy izay voaofana hiaro andian'ondry amin'ny fanafihan'ny alika na amboadia mania. Fa ny alika fotsy kosa mety ho mahery setra raha manapa-kevitra ny hanatona andian'ondry., noho izany dia ilaina ny manao lalana mihodina hialana amin'izy ireo ary aza mampitahotra ny ondry, milamina ary aza mandrahona ny alika na oviana na oviana satria mety hampidi-doza izany.
Misy ny haromotana amin'ny alika, amboahaolo ary ramanavy
Misy ny rabies eo amin'ireo biby any Suisse, indrindra amin'ny alika, amboahaolo ary ramanavy, na dia tranga mitokana aza izy ireo. Fa raha voakaikitry ny alika ianao tsy maintsy mitady fanampiana ara-pitsaboana haingana araka izay tratra ianao.
Misy karazana bibilava misy poizina roa ao amin'ny Alpes: ny bibilava aspic sy peliad, dia fantatry ny ellipticals sy ny endriny mitsangana izy ireo. Fa ny bibilava manafika ihany izy ireo raha mahatsapa fa voarahona izy ireo na raha gaga izy ireo, noho izany dia mila mijery tsara ianao amin'izay alehanao alohan'ny hipetrahanao amin'ny tany na amin'ny faritra be vato. Raha voakaikitry ny bibilava iray ianao dia tokony hangataka fanampiana avy hatrany, satria na dia tsy atahorana ho faty ho an'ny olon-dehibe aza ny poizina dia tsy maintsy esorina na hodinihin'ireo mpitsabo.
Biby kely kokoa: kongona
Tokony ho tadidinao koa fa misy biby alpine kely hafa tokony ho raisinao: ticks. Ny sasany amin'ireo kongona ireo dia mitondra aretina toy ny aretin'i Lyme (borreliosis). Tokony hojerenao ny vatanao isak'alina aorian'ny fitsangatsanganana an-tongotra ary esory izay hitanao. Raha mangidihidy na mirehitra izy ireo dia tokony hahita ny dokoteranao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Alpine Fauna: Biby any Soisa